VOKATRY NY DELESTAZY : Andihizan’ny jiolahy ny tanànan’i Tsaratanàna
Miaina anaty tebiteby lava ireo mponina ao anatin’ny Distrikan’i Tsaratanàna. Ireo Kaominina mandrafitra ny tapany atsimon’ity Distrika ity no tena mitondra faisana. 21 septembre 2021
Anisany antony manome vahana an’io tsy filaminana io ny fahatapahan-jiro lavareny ao an-toerana.
Manao ezaka mankadiry amin’ny fanafoanana tanteraka ny fahatapahan-jiro sy ny delestazy ny Fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Minisitera tompon’andraikitra izay natao hiahy voalohany ny orinasa Jirama. Faritra maro manerana ny Nosy anefa no mbola miaina ao anatin’izay delestazy izay na dia efa azo lazaina ho mihamihena aza izany. Anisan’izany, ohatra, ny eto an-drenivohitra izay mbola ahitana fahatapahan-jiro matetika amina faritra maro isaky ny hariva.
Araka ny tatitra nataon’ny Lehiben’ny Distrikan’i Tsaratanàna, Rabenandrasana Nicolas dia anisany mbola mizaka ny voka-dratsy aterak’io fahatapahan-jiro io ny Distrika tantaniny. Mihamahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana, manao izay danin’ny kibony amin’ny fanaovana ny asa ratsiny ireo jiolahy satria maizina ny tanàna. Nambarany fa tena lasibatra amin’izany ny Kaominina Brieville izay zara raha misy herinaratra mandeha rehefa alina ny andro, tahaka izany ihany koa ny eo an-tampon-tanànan’i Tsaratanàna.
Renim-pianakaviana maty novonoin’ny jiolahy
Hatramin’izay no efa voasokajy ho isan’ireo Distrika mbola mena amin’ny asan-jiolahy sy tsy fandriam-pahalemana i Tsaratanàna. Ny fanafihana mitam-piadiana, fakàna an-keriny sy ny vono olona amin’ny fomba feno habibiana ataon’ireo olon-dratsy no tena mahazo laka. Vao mainka manampy trotraka an’io trangan-javatra io ny delestazy izay manamora ny asa ratsy ataon’ireo mpanafika. Ny herinandro lasa teo, renim-pianakaviana iray no namoy ny ainy rehefa novonoin’ny jiolahy. Tokantranona mpivarotra iray tao amin’ny Kaominina Brieville no notafihina andian-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana ka naratra mafy vokatr’izany ny tovolahy iray vao erotrerony rehefa nikasa hanohitra. Nentin’izy ireo an-keriny hanaraka azy kosa ilay ramatoa tompon-trano izay novonoiny teny an-dalana.
“Tamin’ny alakamisy alina, tokony ho tamin’ny 7 ora dia nisehoana fanafihan-jiolahy tao amin’ny tapany Atsimon’ny Distrikan’i Tsaratanàna, tao amin’ny Kaominina Brieville. Jiolahy maromaro no nanafika mpivarotra ary lasan’ireo jiolahy an-keriny ilay renim-pianakaviana. Tovolahy iray eo amin’ny 20 taona eo kosa no notifirin’izy ireo teo amin’ny tanany ary efa noentina any amin’ny toeram-pitsaboana. Rehefa nanara-dia ny Miaramila dia novonoin’ireo jiolahy teny an-dalana ilay renim-pianakaviana. Tsy hitan’ireo Miaramila ny namonoana an’ilay renim-pianakaviana ary tsy hitan’izy ireo ihany koa ny fatiny”, araka ny fitantaran’ny Lehiben’ny Distrika, Rabenandrasana Nicolas. Mandry tsy lavo loha ny mponina vokatr’izany, andihizan’ireo jiolahy tanteraka ny tanàna ary tsy mitsitsy mandatsaka ain’olona mihitsy.
Ezaka amin’ny fampandriana fahalemana
Ankoatra ny hetsika fampandrian-tany izay ataon’ireo Miaramila amina faritra maro mandrafitra ny Distrikan’i Tsaratanàna iny dia manao izay ho afany amin’ny hamerenana ny filaminana ihany koa ireo tompon’andraikitra ao an-toerana. Misy hatrany ny fivoriana fikaonan-doha entina hitadiavam-bahaolana manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana io. Mihatra manerana ny Distrikan’i Tsaratanàna ny tsy fahafahana mivoaka ny trano sy mivezivezy na ny “couvre-feu” manomboka amin’ny 12 ora alina.
Tsy maintsy manao fisafoana manerana ny tanàna ihany koa ny Miaramila sy ny Polisy. “Tsy mitsahatra ny OMC izay tarihin’ny Lehiben’ny Distrika ao Tsaratanàna manao ny fivoriana matetika izay iarahana amin’ireo mpitandro filaminana ao an-toerana mahakasika an’io tsy fandriam-pahalemana io. Manomboka amin’ny 12 ora alina ny “couvre-feu” izay anaovan’ny Miaramila sy Polisy fisafoana manerana ny tanàna. Napetraka ihany koa ny Miaramila sy ny Zandary amin’ny toerana rehetra izay hita fa mafana amin’izay tsy fandriam-pahalemana izay”, araka ny fanazavana hatrany.
Mila vahaolana haingana ny Delestazy
Mitarika fahasahiranana goavana ho an’ny mponina ao Tsaratanàna ny fahatapatapahan-jiro matetika izay miteraka an’io tsy fandriam-pahelamana io ihany koa. Rehefa maizina ny tanàna dia mora foana ho an’ireo olon-dratsy ny manao ny fanafihana. Hatrany amin’ireo Kaominina manodidina ka hatreo an-tampon-tanànan’ny Distrika dia mahazo vahana izay fahatapahan-jiro izay. “Ny zavatra tena sarotra dia ny fahatapahan-jiro, raha tsy raisina ny fepetra mahakasika ny herinaratra io satria ny Kaominina Brieville izany dia tsy misy jiro mihitsy amin’izao.
Tahaka izany ihany koa ny eto an-tampon-tanànan’ Tsaratanàna, ny jiro zara fa mandeha izay anaovanay antso avo amin’ny tompon’andraikitry ny orinasa Jirama”, hoy hatrany ny fanazavana noentin’ny Lehiben’ny Distrika. Anaovan’izy ireo antso avo amin’ny tompon’andraikitra izany mba hitadiavana vahaolana faran’izay haingana. Na maty paika sy tsara lamina aza ny paikady hanoherana an’ireo olon-dratsy raha vao maizina ny tanàna dia mora ho azy foana ny manatanteraka ny asa ratsiny. “ Mila mirehitra 24 ora amin’ny 24 ora ny jiro ato anatin’ny Distrikan’i Tsaratanàna mba hisorohana ny tsy fandriam-pahalemana”, araka ny antso avo nataon’izy ireo.